समाधान: avrdude: ser_open (): Arduino - Ikkaro मा उपकरण खोल्न सक्दैन
मुख्य पृष्ठ >> Arduino >> समाधान: avrdude: ser_open (): Ardino मा उपकरण खोल्न सक्दैन
समाधान: avrdude: ser_open (): Ardino मा उपकरण खोल्न सक्दैन
द्वारा नाचो मोराटो
यस लेखमा म अर्डिनोमा कसरी सामान्य त्रुटि ठीक गर्ने भनेर वर्णन गर्न जाँदैछु।
avrdude: ser_open (): उपकरण खोल्न सक्दैन "/ dev / ttyACM0": अनुमति अस्वीकृत
धेरै समय पछि अरुडिनो प्रयोग नगरीकन मैले मेरो दुई सम्मिलित गरें (मूल र इलिगु) मेरो छोरी संग केहि गतिविधिहरु गर्न। म तिनीहरूलाई जोड्दछु, म ब्लिंक घुसाउन जान्छु कि सबै ठीक छ भनेर हेर्नको लागि र जब म बोर्डमा पठाउन जान्छु यसले प्रख्यात त्रुटि फिर्ता गर्दछ।
अर्डिनो: १..1.8.5..0 (लिनक्स), कार्ड: "अर्डिनो / जेनुनो युनो" एअर्डुडे: सेर_ओपेन (): उपकरण खोल्न सक्दैन "/ dev / ttyACMXNUMX": अनुमति बोर्डमा अपलोड गर्न अस्वीकार भयो। सुझावहरूको लागि http://www.arduino.cc/en/Guide/ समस्या निवारण#upload भ्रमण गर्नुहोस्।
दुबै मेरो पीसी र मेरो ल्यापटपमा मैले उबन्टु १ 18.04.०XNUMX स्थापना गरेको छु।
म निम्न अनुसरण गरेर सुरू गर्छु लिंक गर्नुहोस् जुन तपाईं मलाई सुझाव दिनुहुन्छ। र म यी चरणहरू अनुसरण गर्दछु
En उपकरण / प्लेट अर्डिनो / जेनुनो यूनो चयन गरिएको छ
En उपकरण / सिरियल पोर्ट / dev / ttyACM0
र कागजातले सुझाव दिए जस्तै ड्राइभहरू र अनुमतिहरूमा समस्या भएको खण्डमा म टर्मिनल खोल्छु र कार्यान्वयन गर्छु।
कहाँ yourUserName तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम हो
अब म लग आउट गर्छु र फेरि लग इन गर्छु। र मात्र केसमा म पीसी / ल्यापटप पुन: शुरू गर्छु।
यो अझै पनी मेरो लागि काम गर्दैन र अर्डिनो कागजातले अब मद्दत गर्दैन। त्यसैले म हेर्दै छु, फोरम र ब्लगमा। यदि यस समयमा यसले तपाईंको लागि काम गर्दैन र तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ। अर्को चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्
ls / dev / ttyACM0 रिटर्न / dev / ttyACM0
ls -l / dev / ttyACM0 crw-rw—- १ रूट डायलआउट १1, ० नोभेम्बर २ 166 १ 0::26१ / dev / ttyACM फर्काउँछ
यसको साथ हामी पोर्ट अवस्थित छ भनेर पुष्टि गर्दछौं
हामी अनुमतिहरू दिन जाँदैछौं र यदि हाम्रो प्रयोगकर्तासँग आवश्यक अनुमतिहरू छन् कि छैनौं।
र मैले देखेको छु कि प्रयोगकर्ता समूह भित्र छ डायलआउट त्यसैले यो भाग हामीले यो सहि पायौं।
के मेरो लागि काम गरीएको छ अरुडिनो पुनर्स्थापित गर्न।
यदि तपाइँ जाँच गर्नुहुन्छ
र यसले पुन: स्थापना गर्ने अर्डिनो निश्चित गर्नु पर्छ केहि पनि फिर्ता गर्दैन।
र यदि तपाईं समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनुहुन्न, मलाई एक टिप्पणी दिनुहोस् र म तपाईंलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछु।
AVRDUDE समस्या निवारण उपकरण
त्यहाँ छ स्क्रिप्ट तिनीहरूले यो समस्या समाधान गर्न को लागी तैयार गरेका छन्। तपाइँले यसलाई मद्दत गर्दछ कि भनेर तपाइँ हेर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो प्रयोग गरेको छैन तर म छोड्दै छु किनकि मलाई लाग्छ कि यो उपयोगी संसाधन हुन सक्छ।
म AVRDUDE के हो भनेर राम्ररी बुझ्नको लागि म अलि बढी जानकारी छोड्दछु। नाम AVRDUDE बाट आउँछ - AVR डाउनलोडर / UploaDEr
AVRDUDE एक उपयोगिता हो ROM र EEPROM सामग्रीहरू डाउनलोड गर्न / लोड / हेरफेर गर्न इन-सिस्टम प्रोग्रामिंग (ISP) प्रविधिको प्रयोग गरेर AVR माइक्रोकन्ट्रोलरहरूको सामग्रीहरू।
एआरआरडीईडीई ब्रायन एस डीनले माइक्रोक्रन्ट्रोलरहरूको एटमल एवीआर श्रृंखला को लागी एक प्रोग्रामर को रूप मा एक निजी परियोजना को रूप मा शुरू गरीएको थियो।
तपाईं सफ्टवेयर र अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ परियोजना वेबसाइट.
यसले तपाइँलाई चासो दिन सक्छ:
मेरो कम्प्युटर खोल्छ तर स्क्रिनमा केहि पनि देखा पर्दैन
LEGO Boost ले ब्लुटुथ जडान गर्दैन
कसरी तालिकाहरू PDF बाट एक्सेल वा CSV मा ट्याबलाको साथ रूपान्तरण गर्ने
एनाकोंडा ट्यूटोरियल: यो के हो, यसलाई कसरी स्थापना गर्ने र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने
बीज कटाउन कम्बल तताउने
उबंटुमा ब्याकएन्डबाट केरा र टेन्सरफ्लो कसरी स्थापना गर्ने
पुरानो लिनक्स कम्प्युटर पुन: प्राप्ति
LEGO Boost के हो?
विभाग Arduino टिकट नेभिगेसन
क्यारोलिना रिपर वा क्यारोलिना रिपर
१ टिप्पणीमा "समाधान: avrdude: ser_open (): Ardino मा उपकरण खोल्न सक्दैन"
अप्रिल १, २०२० बिहान १:०२
मलाई अर्डिनोसँग समस्या छ किनकि यो आईडीसँग संचार गर्दैन वा यसको ठीक उल्टो मसँग सबैकुरा कन्फिगर गरिएको छ, सबै पोर्ट प्लेट इत्यादि। मैले फ्लिप डाउनलोड गरें तर मलाई थाहा छैन कि फर्मवेयरलाई पुन: लोड कसरी गर्ने भनेर मलाई लाग्छ जुन मलाई लाग्छ। के गलत छ, तपाइँसँग अर्धिनो कसरी पुन: स्थापना गर्ने थोरै विस्तार हुन सक्छ धन्यवाद म यस नयाँ हुँ
3 AVRDUDE समस्या निवारण उपकरण